Mety miala ny fanahy
Manao ahoana kosa ary no hamafin’ny fampijaliana ataonareo tokony hihatra amin’izay nanitsaka ny Zanak’Andriamanitra ka nanao ny ran’ny fanekena izay nanamasina azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny Fanahin’ny fahasoavana. Heb. 10 :29
Tsy fantatr’ireo olona, izay manohitra ny Fanahin’Andriamanitra ary mahatonga Azy hiala, hoe hatraiza ny mety hitarihan’i Satana azy ireo. Rehefa miala ao amin’ny olona ny Fanahy Masina, dia hataon’io olona io ao anatin’ny tsy fahatsapan-tena ary horaisiny ho toy ny fahazavana marina sy mahitsy ireo zavatra izay noheveriny fa fahotana tany aloha. Raha tsy mandray ny fampitandremana izy, dia handrakotra ny tenany ao anatin’ny famitahana tahaka ny nahazo an’i Jodasy, izay hahatonga azy ho lasa mpamadika sy jamba. Hanaraka tsikelikely ny dian-tongotr’i Satana izy. Iza ary no afaka hanao ezaka miaraka aminy amin’ny tanjona kendreny ? Hiaro ary hisolo vava azy sy hiaraka aminy ve ireo mpitandrina? Ho azy manokana dia tahaka ny anganongano sy arirarira ny tenin’ireny mpitandrina ireny. Ni safidy an’i Satana mba ho namany ny fanahy tahaka izany, izay mandika vilana ny teny voalaza, ary miezaka manakatra ny dikan’izany ao an-tsainy, amin’ny alalan’ny fahazavana feno fahavetavetana. Rehefa miala amin’alahelo ny Fanahin’Andriamanitra, dia tsy misy dikany amin’ireny olona ireny ny antso rehetra natao tamin’ny alalan’ireo mpanompon’Andriamanitra. Hadikan’izy ireo vilana avokoa ny hevitry ny teny rehetra. Hihomehezan’izy ireo ary hotsiratsirainy ireo teny fampitandremana manetriketrika indrindra avy ao amin’ny Soratra Masina, izay hahatorakovitra azy ireo anefa raha toa ka tsy tratry ny fandraikiraikena ataon’ny mpanompon’i Satana izy ireo. Very maina ireo antso rehetra natao tamin’izy ireo. Tsy hihaino fana-narana sy torohevitra izy ireo. Hankahalain’izy ireo ny fitalahoana rehetra ataon’ny Fanahy Masina , ary tsy ankatoaviny ny didin’Andriamanitra, izay nohamarininy sy nankalazainy fahiny. Enga anie ny tenin’ny apôstôly hampody an’ireny fanahy ireny: “Ry Galatiana adala, iza no nanimba anareo, kanefateo imasonareo indrindra no nanehoana marimarina an’i Jesosy Kristy voahombo tamin’ny hazo fijaliana?” Gal. 3:1. Manaraka ny torohevity ny fony, manokana izy ireo mandra-piovan’y fahamarinana ho tsy fahamarinana intsony ho azy ireo.
Ilaina ny miaina amin’ny tenin’Andriamanitra rehetra, raha tsy izany dia hanjakazaka indray ny toetrantsika fahiny. Ny Fanahy Masina, ilay fahasoavana mahavonjin’ny fahamarinana ao amin’ny fanahy, no mahatonga ireo mpanara-dia an’i Kristy ho iray amin’izy samy izy, sy ho iray amin’Andriamanitra. Izy irery ihany no afaka mandroaka ny lolompo, ny fitsiriritana, ary ny tsy finoana. Izy no manamasina ny fitiavana manontolo. Izy no mitahiry ny fanahy manana finiavana sy faniriana mba ho voaaro amin’ny herin’i Satana ary ho voatahiry ao amin’Andriamanitra. Izany ny herin’ny fahasoavana Hery avy amin’Andriamanitra izany. Rehefa eo ambanin’ny hery miasa manginan’io hery io dia lasa misy fiovana eo amin’ny fahazarana fahiny, ny fombafomba, ny zavatra fanao, ary mitohy ao amin’ny fanahy ny asan’ny fanamasinana, tsy mitsahatra mitombo sy mihamivelatra hatrany